मुख्यमन्त्री ज्यु तपाईलाई चै काेराेना लाग्दैन र ? - Purbeli News
मुख्यमन्त्री ज्यु तपाईलाई चै काेराेना लाग्दैन र ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ३०, २०७७ समय: २०:०८:२३
विराटनगर / नेपालमा काेराेना संक्रमण झन बढिरहेकाे छ । दैनिक ठुलाे संख्या संक्रमितहरू देखा पर्न थालेका छन् । ७ वटै प्रदेशमा संक्रमणकाे अवस्था उस्तै छ । तिनैतहका सरकार यसकाे नियन्त्रण गर्न लागि परेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तिन वटै सरकारले आफुले सकेकाे गरिरहेका छन् । तर पनि महामारी नियन्त्रण भन्दा पनि झन भयावह बन्दै छ ।
अहिले सम्म काेराेना भाइरसकाे औषधि पत्ता लागेकाे छैन् । त्यसैले याे राेगलाइ फैलन नदिनु नै यसकाे नियन्त्रणकाे प्रमुख उपाए हाे । यसकाे नियन्त्रणकालागि विश्व स्वस्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले ताेकेका प्रमुख सुरक्षका उपायमा मास्ककाे प्रयाेग गर्नु, भाैतिक दुरी कायम गर्ने र समय समयमा साबुनपानीले हात धुने वा सेनिटाइजरकाे प्रयाेग गर्ने नै हुन् । केन्द्र देखि तिनै तहका सरकारले दैनिक जसाे यस्ता मापदण्ड पालना गर्न आग्रह समेत गर्ने गरेका छन् । आम नागरीकले बुजे सम्म र सम्भव भए सम्म यस्ता मापदण्डकाे पालना गरेका छन् । तर पछिल्लाे समय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायकाे पलना नगरेकाे भन्ने आवज उठ्न थालेकाे छ ।
विशेषत उच्च पदस्थहरूले मास्काे प्रयाेगमा ध्यान दिएकाे पाइदैन् । त्यस मध्यका एक हुन प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्रि शेरधन राइ । उनले पछिल्ला केहि कार्यक्रममा मास्ककाे प्रयाेग गरेका छैन् । अर्थात काेराेना संक्रमण नियन्त्रणकालागि सरकारले बनाएकाे नियमकाे पलना गरेका छैन् । यो साता मुख्यमन्त्रि राइले स्वास्थ्य मापदण्डकाे पालना नगरेका तिन सार्वजनिक कार्यक्रम यस्ता छन् ।
केहि दिन पहिले मुख्यमन्त्री राईले भोजपुर र उदयपुरलाई जोड्ने दुधकोशी नदीको मोटरेवल पक्की पुलको शिलान्यास गरे । पदेश सरकारको २१ करोड २३ लाख १२ हजार ४०७ रुपैँया लागतमा निर्माण हुन लागेको साे पुलको शिलान्यास कार्यक्रमा उनले मास्ककाे प्रयाेग गरेका छैन् । करिब २० देखि २५ जना सम्म वरिपरि राखेर राइले विना सुरक्षा सवधानी पुलको शिलान्यास गरे । त्यहाँ अन्यले पनि माक्स लगाएका थिएनन् । भने भाैतिकदुरीकाे पालना भएकाे थिएन ।
मंगलबार सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको सलकपुर तथा विराटचोकमा निर्माण सम्पन्न भएको सार्वजनिक शौचालय तथा पुस्तकालय भवनको समुद्घाटन कार्यक्रममा पनि उनि बिना मास्क देखिए । कार्यक्रममा पुग्दा मास्का लगाएर पुगेका उनले कार्यक्रमका दैरान मास्क खाेलेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी धेरैले मास्ककाे प्रयाेग गरेका थिए भने केहि भाैतिकदुरीकाे पालना भएकाे थियाे ।
६५ औं प्रहरी दिवसकाे अवसरमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरमा शुक्रबार आयाेजित कार्यक्रमा पनि उनी बिना मास्क देखिए । उनले उत्कृष्ट प्रहरीलाइ पुरस्कृत गर्दा बिना मास्क देखिएका थिए । कार्यक्रमा सहभागी धेरैले मास्क लगायतका सबै स्वास्थ्य मापदण्डकाे पालना गर्ने प्रयास गरेका थिए ।